Ngathi-iNanchang Eco Hardware Products Co, Ltd.
Ukususela kwisiseko, inkampani yethu ijolise ikakhulu kwimveliso kunye nasekuthengisweni kwezinto zokusebenza ezisetyenziselwa iimpahla, izihlangu, iminqwazi, iibhokisi, iibhegi kunye nabanye. Iimveliso zethu eziphambili zibandakanya zonke iintlobo zeethegi, iilebhile zentsimbi, amaqhosha esinyithi, i-buckles zentsimbi, iileksi, iilebhile zempahla, iipatches zesikhumba, izingxobo zeebhegi, i-buckles yasentwasahlobo, izixhobo zangaphantsi zangaphantsi, iipakeji kunye nokunye.
Inkampani yethu inamalungelo okungenisa kunye nokuthumela ngaphandle kunye nokunikezela ngamava okusabalalisa kunye nokuthumela ngaphandle. Sinokubonelela ngenkonzo ebanzi yokugcinwa, ukugcinwa kunye nenkonzo yokuthumela kwelinye ilizwe. Iinkqubo eziphambili zokubhukisha kwi-intanethi ziqinisekisa ukusebenza ngokukuko kunye nokulungiswa kwedatha ngokuchanekileyo kwaye kuthintela nakuphi na ukukhathazeka kwabaxumi.
Umzi-mveliso wethu ubekwe eShanghai. Ummandla uphela umalunga ne-3500 yeemitha zesikwere. Kwaye sineofisi yesebe ebekwe eNanchang, Jiangxi. Sinabasebenzi abamalunga ne-180, kubandakanya amathambo omqolo angama-25 abangoochwephesha okanye abantu ababandakanyeka kuphando nakuphuhliso. Inkampani yethu inokubonelela ngoyilo olwenziwe ngokwezifiso kunye neengcebiso ezizodwa kubathengi.
Inkampani yethu inenkqubo engqongqo yokulawula umgangatho. Sisoloko sinyanzelisa ukuvavanywa komgangatho we-100% nokuba zithini na izinto ezingekenziwa okanye iimveliso ezigqityiweyo. Umgangatho wethu obalaseleyo kunye nenkonzo elungileyo iphumelele ukuzithemba kunye nokunconywa kubathengi abaninzi. Ngoku, siye saba ngumthengisi wee-accessory okhethiweyo kwiimveliso ezininzi zeengubo eziphezulu.
Samkela ngokufudumeleyo uphando oluvela kubathengi baphesheya nakwabasekhaya. Siza kuhlala siphatha bonke abaxumi ngokungathandabuzekiyo kwaye ngokungakhathali kwaye nomyalelo wee uya kufumana ingqalelo yethu ephezulu.